'Jackass Forever' Trailer na-eweta More Mindless Mayhem - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Jackass Forever' Trailer na-eweta na More Mindless Mayhem
'Jackass Forever' Trailer na-eweta na More Mindless Mayhem
by Trey Hilburn III July 20, 2021 1,017 echiche
Echeghị m na m ga-ekwu ya ọzọ… mana Jackass na ụmụ okorobịa ndị mejupụtara Jackass na-abịa azụ! Oge a Jackass Ruo Mgbe Ebighị Ebi.
Na nchịkọta akụkọ maka Jackass Ruo Mgbe Ebighị Ebi na-aga dị ka nke a:
Na-enwe ọ theụ nke ịbịakọta ọnụ na ndị enyi gị kachasị mma na ogbugbu zuru oke na dingdong, ndị ọrụ jackass mbụ laghachiri maka agba ọzọ nke ọchị, na-enweghị isi, na ngosipụta dị egwu nke ihe ọchị na obere enyemaka site na ụfọdụ ndị ọhụụ ọhụrụ na-atọ ụtọ. Johnny na ndị otu ahụ na-ebugharị envelopu ahụ ọzọ na October 22 na jackass ruo mgbe ebighị ebi.
Amachaghị m otú Johnny Knoxville na ndị ọrụ ya si daa. Echere m, nzuzu anụ ahụ nke na-etinye ahụ ha dị ukwuu. Gbakwunye na ha na-eme ya kemgbe ọtụtụ afọ. O yiri ka ha akwụsịbeghị. Echere m, ọ bụrụ na ịlele akụkụ nke ụgbọala na-adọkpụ mgbe Knoxville na-ewe oke ehi niile n'igbe na n'olu, ị ga-eche otú o si dị ndụ ugbu a?
Ọ bụ ihe ọ funụ, ọ dara ogbi ma ụmụ okorobịa a abanyela n'ụzọ buru ibu nke ọdịbendị na ndụ anyị… kama anyị nwere mmasị na ya ma ọ bụ.
You nwere obi ụtọ banyere ịlele Jackass Ruo Mgbe Ebighị Ebi na October 22? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Onye nduzi egwu Street nwere nnukwu echiche banyere otu esi agbasa aha. Gụkwuo ebe a.